Nockherberg Starkbierfest - Munich Yakasimba Beer Mutambo | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > Nockherberg Starkbierfest – Munich Yakasimba Beer Mutambo
Nockherberg Starkbierfest – Munich Yakasimba Beer Mutambo
Rovedza Kufamba Germany, Famba Europe
Vafambi Most doro-rudo vane Munich kumusoro zvavo kuzoita pasi. Zvinofanira kuva yakapiwa kuti Oktoberfest aizova ikoko, asi Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival anounza chinhu yokuwedzera. Aihwa, kwete mapoka evanhu. uchasvika ruzivo hafu sezvo vazhinji. Asi doro ndiro kaviri simba! Ruzha kufanana yakarurama kukava kure Kurume uye chitubu, kwatiri!
Munich, Bavaria kuti guta, musha zvivako emakore-kare uye wanda mamiziyamu. The guta inozivikanwa waiitwa gore negore Oktoberfest yayo doro dzimba, kusanganisira famed Hofbrauhaus, rakavakwa 1589. Munguva Altstadt (Old Town), pakati Marienplatz square ine zviratidzo dzakadai seNeo-Gothic Neues Rathaus (guta horo), ane mukurumbira glockenspiel anoratidza kuti chime uye reenacts nyaya kubva muzana remakore rechi16.
Ndizvo nguva yako yokutanga kushanyira Munich? Iwe vangafara kuziva kuti chinhu chaizvo mushanyi-ushamwari guta, mune zvinenge zvose zvatinoita. It ane zvikuru dzichipfekeka kwezvivako, rinopa siyana zvose indoor uye makomba zvinokwezva, okunze ari munhu munyoro kupfuura kuchamhembe zvikamu Jerimani uye Super nyore kuwana famba uye kusvika Nockherberg Starkbierfest – The simba doro mutambo muMunich.
Musataura German kana Bavarian? Hapana dambudziko! Vazhinji kuchizvarwa chevechiduku anotaura Chirungu, asi kukwanisa kushandisa zvishoma German (kana kunyange Bavarian, kana iwe angatsunga) zvikuru chaizvo veko. Nyika ine mukurumbira wokuva venga, asi zviri kure nechokwadi. Munich zvemo vane ushamwari uye kamwe ukatanga kuziva kwavari zvichibatsira. Mumwe inobvira zvinhu “tsika kugwinha” ingava sei kunyange Neine Basa Chaizvo Downtown munzvimbo, unogona achiri zii pamusoro weekday muchando usiku kana Sunday; Munich anogona kupa zvayakanakira zvakawanda muupenyu guta (mumaresitorendi zvikuru, ezvivako, zvizhinji zvinhu zvekuita) kubvisa yakawanda chinongova chipatapata, kumhanya-mhanya, uye kuzvidya mwoyo. guta rino Zviri yakanakisisa nyika zhinji: imwe mumadhorobha mhepo mvura nenzvimbo, yakanaka dzinongoitika zvinokukanganisa, tsika dzakasiyana uye dzakawanda sezvaiita yakawanda chinyakare Bavarian nzira upenyu. Uye zvazvinoita pasina achiti kuti doro ndiro nyika yakakurumbira nokuda kwechikonzero!
Hamburg kuna Munich Zvitima
Leipzig kuna Munich Zvitima
Rinonzi Ghent kuna Munich Zvitima
A Local CHITSVENE
Nokuti kumativi nhatu kutanga chitubu, doro zvose mhiri Munich akamisa zvavo dzimba doro.
The doro mutambo simba ndezvevanhu Munich kufanana doro minda uye Oktoberfest. Saizvozvo, uyu mutambo wedoro unogona kunge uri weguta chakavanzika kwazvo. Zviri chaizvoizvo kunyange mukuru Oktoberfest, yakatanga pakati pe-1600s, kubudikidza Munich kuti Paulaner mamongi uye Paulaner Nockherberg ndiyo yokutanga vakatozodzokera doro mutambo simba Munich raMwari!
Rwavanyepedzeri mamongi dzakarukwa doro chinwiwa kuvatisigira kuburikidza muLent kutsanya, akatumidza kwavo pick-ini-up 'doro akaropafadza yababa' kana 'mafuta matsvene St. Francis '. pakupedzisira, vakagara pasi 'Salvator' - Latin muponesi.
Salzburg kuna Munich Zvitima
KuCologne Munich Zvitima
Valenza kuna Munich Zvitima
Uye kupi chairo Munich Strong Beer Festival vanobva?
Rinowanzogamuchirwa akaudza kupfuura mavambo nyaya starkbier ari nyore zvakaedza mamongi nzara. Kumanikidzwa kutsanya munguva muLent, Mamongi vakatanga yokubika starkbier senzira loophole nzira kuti avo zvemano macalorie. zvakare, nemhaka yepamusorosoro zvazvichanyungudutswa rakasimba kugutsikana (aizivikanwa sana), starkbier zvakazivikanwa kuzivikanwa sezvo mvura chikafu.
Asi mhiri kuti, Starkbier anoita, ehe saizvozvo, kuva yepamusoro doro kugutsikana (kubvira 7.5%-9%). In mashoko munuhwi, zviri malty uye hazvishamisi (zvichida ndikati deceivingly) chechetere uye zvachinokonzera zvirokwazvo 1000% zvinokambaira pamusoro pako. se, "Ndapota amai, kurega kutamba patafura - uri scaring vana "zvinokambaira pamusoro pako. Iwe vanyeverwa.
Aunganidze zvinhu: starkbier ane doro simba, yakasimba mukati Doro kugutsikana asiwo mune zvakanyungudutswa zvakasviba, kuchakuzadza uye nyangarara imi. Iwe vanyeverwa!
Quick Tips nokuti Munich Strong Beer Festival
Nepo huru Supermarket ngetani uye kunotenga nehoro vanogona kugamuchira kadhi rako rokubhengi, maresitorendi mazhinji nezvitoro muMunich zvinongogamuchira mari kana makadhi eEC (izvo vakafanana debit makadhi). Ivai nechokwadi chekuti euros zvakakwana nemi kuti kushandiswa kwezuva nezuva.
simba doro tapping
The Starkbieranstich zvinoreva tapping pamusoro doro simba (i.e.. tapping ari keg) - zviri pamusoro hombe muMunich mhando uye chinoratidza kutanga Starkbierfest. At Paulaner am Nockherberg, Ivo vanopemberera tapping wavo Salvator simba doro ine political chiridzwa yakagochwa.
Vanhu chaizvoizvo kuzadza zvavo doro horo dzomuungano enyika uye pavanoseka navo kuburikidza rwiyo uye dramatics. Kana iwe Fancy vachiongorora chii chiitiko wakafanana, pano ari YouTube Clip kubva gore rapera.
Zurich kuna Munich Zvitima
WokuMainz kuna Munich Zvitima
Augsburg kuna Munich Zvitima
Unoda bhuku chitima tikiti kuna Munich? Zvadaro musoro pamusoro kuti SaveATrain apo uchafarirwa. tikiti renyu mumaminitsi pamwe No peaky, kuwedzera, uye mari yakavanzwa!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnockherberg-starkbierfest-munich-beer-festival%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#Beerfestival	#NockherbergStarkbierfest	#simba doro tapping	#TraveltoMunich	bere Travel	mutambo drink	Munich
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Famba Europe
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Portugal, Rovedza Kufamba Spain, Famba Europe